Tebas: “Waxaan Messi ka doonayaa LaLiga sida aan u doonayo Ronaldo, Mourinho, Guardiola iyo Klopp” – Gool FM
(Madrid) 27 Nof 2020. Javier Tebas ayaa ka hadlay mustaqbalka kabtanka kooxda Barcelona Lionel Messi.
Madaxweynaha LaLiga ee Javier Tebas ayaa sheegay inuu ka doonayo xiddiga kooxda Barcelona ee Lionel Messi La Liga, si la mid ah sida uu uga doonayo Cristiano Ronaldo, Jose Mourinho, Pep Guardiola iyo Jurgen Klopp horyaalka.
Mustaqbalka Messi ayaa wali ah mawduuc muhiim ah oo wali taagan, kaddib markii uu gudbiyay codsi uu ku dalbanayo in la iibiyo, waxaana xiiseynaya adeegiisa kooxo waa weyn ee Yurub ah.
Xiddiga lixda jeer ku guuleystay abaal-marinta Ballon d’Or ayaa xagaagii hore loo saadaaliyay inuu ku biirayo kooxda ka dhisan horyaalka Premier League ee Manchester City ka hor inta uusan dooran inuu sii joogo Spain, xilli sidoo kale lala xiriirinayay kooxaha Paris Saint-Germain iyo Inter.
Haddaba Tebas ayaa wax laga weydiiyay mustaqbalka Messi, wuxuuna hoos u dhigay saameynta kabtanka xulka Argentina uu kaga tagayo kooxda, wuxuuna yiri:
“Waxaan doonayaa in Messi uu ka ciyaaro LaLiga, sida aan u doonayo [tababaraha Tottenham] Mourinho, [tababaraha City] Guardiola, [tababaraha Liverpool] Klopp, [Xiddiga Juventus] Cristiano Cristiano,”
“Dhammaantood waxay kaa caawinayaan inaad korto.”
“Waxaan rajeynayaa in Messi, oo ah ciyaariyahankii ugu fiicnaa ebid, uu xirfadiisa ku dhamaysan doono halkan.”
Si kastaba ha ahaatee, Messi wuxuu xirfadiisa ciyaareed oo dhan ku qaatay garoonka Camp Nou, halkaasoo uu ka soo muuqday kooxdii dhalinyarada ee Barca sanadkii 2004.